» ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–२ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–२ (भिडियो)
१५ आश्विन २०७६, बुधबार ०५:१९
मकवानपुर, १५ असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्याटल राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसन हुँदै ब्लाईन्ड अडिसनबाट छनौट भएका ६४ जना प्रतियोगीहरुले अहिले ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस भिडियो सिरिजको दोस्रो भागमा हामीले ब्याटल राउण्डको दोस्रो एपिसोडमा कसले कस्तो गाए ? अनि को बाहिरिए र को सेलेक्ट भए ? यसका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । भ्वाईस अफ नेपालका बारेमा अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु हेर्नुहोला । हेर्नुहोस् यो भिडियो–
ब्याटलको दोस्रो एपिसोड अन्तर्गत पहिलो ब्याटलमा टिम राजुबाट श्रवणकुमार अधिकारी र करण दोङले प्रतिस्पर्धा गरे । ‘पश्चताप’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरुमध्ये करण नकआउटका लागि छनौट भए भने श्रवण बाहिरिए । निकै दमदार प्रस्तुति दिएका श्रवणले सबैको मन जिते । करण दोस्रो राउण्डका लागि तयारी गर्दैछन् । निकै उर्जावान प्रस्तुति दिएका कारण श्रवणलाई केही समय गारो समेत भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो ब्याटलमा टिम प्रमोदबाट साईकिरण लम्साल र सुस्मा विश्वकर्माले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘तिमी बिना बाँच्न गारो भो’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरुमध्ये साईकिरण लम्साल नकआउटका लागि छनौट भएका छन् । निकै नै सुमधुर आवाज भएकी सुस्मा ब्याटलबाट बाहिरिईन् ।
चौधौँ एपिसोडको तेस्रो ब्याटल टिम आस्थाबाट भएको थियो । दार्जिलिङकी याङ्की योल्मो र अनिश महर्जनको यो साँगितिक भिडन्तलाई भ्वाईस अफ नेपाल सिजन २ को निकै नै यादगार ब्याटलका रुपमा लिईन्छ । चारै जना कोचको स्ट्यान्डिङ अवेसन पाएको यो ब्याटल ‘सधैँ सधैँ आईरहन्छ’ बोलको गीतमा भएको थियो । निकै नै खारिएको यो ब्याटलमा याङ्कीले बाजी मारिन् अनि नकआउटका लागि छनौट भईन् । यता उत्तिकै दमदार आवाज भएका अनिशले आफुलाई आवाजको दुनियाँमा निकै अगाडिको यात्रा तय गर्ने धावकका रुपमा प्रमाणित गरिदिए । त्यस्तै यस एपिसोडको अन्तिम ब्याटलमा टिम दिपका धर्मबज्र लामा र डम्बर हिङमाङबिच भएको थियो । ‘अब यो बाटो’ बोलको गीतमा भएको यस ब्याटलमा डम्बरले बाजी मारेर नकआउटका लागि छनौट भए । यता धम्रबज्रले निकै नै दमदार प्रस्तुति दिएर बाहिरिए । कोचहरुसँग भएको एक स्टिलको अधिकार अहिलेसम्म कसैले प्रयोग गरेका छैनन् ।
आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? तपाईको विचारमा फाईनलसम्म कुन प्रतियोगीहरु पुग्न सक्छन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
यी हुन् ब्याटलका लागि छानिएका उत्कृष्ट ६४ प्रतियोगीहरु